Ungayixhumanisa kanjani i-Alexa nezibani 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Izibani ze-Smart ngokungangabazeki isinyathelo sokuqala sokuletha ekhaya umqondo we-automation yasekhaya, okungukuthi, isilawuli kude (noma ngosizo lwemiyalo yezwi) yawo wonke amadivayisi wethu kagesi. Uma sithathe isinqumo sokuthenga eyodwa noma amaningi ama-smart bulbs futhi sifuna ukuwalawula ngemiyalo yezwi enikezwa yi-Amazon Echo ne-Alexa, kulo mhlahlandlela sizokubonisa ukuthi ungaxhuma kanjani i-Alexa kwizibani nokuthi imiphi imiyalo yezwi esingayisebenzisa kuyo.
Njengesiqephu, sizokukhombisa ukuthi yimaphi amalambu ahlakaniphile ahambisana nakanjani ne-Alexa ne-Amazon Echo, ukuze uqiniseke ukuthi ungabalungiselela kahle imiyalo yezwi yabo.
FUNDA NONKE: I-Amazon Alexa: Ungayakha Kanjani Izindlela Nemiyalo Yezwi Entsha
Amalambu namapulagi ahambisana ne-Amazon Alexa
Ngaphambi kokwenza noma yini ngemiyalo yezwi, kuzodingeka siqiniseke ukuthi amalambu ahlakaniphile ayahambisana ne-Alexa; ngaphandle kwalokho ngeke sikwazi ukubangeza ohlelweni futhi silulawule kude. Uma sesithengile amalambu ahlakaniphile, sibheka ukuthi ngabe "iyahambisana ne-Amazon Alexa" noma "iyahambisana ne-Amazon Echo" icacisiwe kupakethe noma kumanuwali.
Uma singenawo amalambu ahambisanayo noma ama-bulb, singacabanga ukuwathenga Isibani se-LED esihambisana ne-Alexa, njengamamodeli abhalwe ngezansi.
IPhilips Lighting Hue White Lampadine LED (€ 30)
I-Bulb TP-Link KL110 Wi-Fi E27, isebenza ne-Amazon Alexa (€ 14)
Isibani esihlakaniphile, i-LOFTer E27 RGB 7W WiFi smart bulb (€ 16)
I-Smart bulb E27 AISIRER (izingcezu ezi-2, i-2 €)
I-TECKIN E27 multicolor dimmable smart bulb (€ 49)
Ngakolunye uhlangothi, uma singathanda ukusebenzisa kabusha ama-bulbhu esivele sinawo (ngaphandle kokuhambisana), singacabanga nokuthenga ama-adaptha ahlakaniphile kunoma iyiphi i-bulb, njengaleyo enikezwa yi-Smart WiFi E27 Light socket, Aicase Intelligent WLAN (€ 29).
Ngabe sifuna ukuguqula amalambu asendlini yokuphumula noma ekamelweni lokulala (lawo anama-plugs athile)? Kulokhu, singonga ekuthengeni ama-smart bulbs ngokugxila kuma-smart Wi-Fi amasokhethi, njengalawo abhalwe ngezansi.
I-Presa Intelligent WiFi Smart Plug Telecomando ZOOZEE (€ 14)
Isokhethi yamandla kaPhilips Hue (€ 41)
Isokhethi ye-TP-Link HS110 ye-Wi-Fi enokuqapha amandla (€ 29)
Ipulagi yokuqapha amandla ye-Smart Plug WiFi Smart Plug (izingcezu ezi-4, € 20)
Yonke imikhiqizo efakwe kuhlu iyahambisana ne-Alexa, okumele sikwenze nje ukuyixhuma kunethiwekhi yethu ye-Wi-Fi (ukulandela imiyalo ebhukwini lomsebenzisi), sebenzisa izinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene ukumisa ukufinyelela okukude (sizocelwa ukuthi senze i-akhawunti entsha ) Futhi, kungemva kwalokhu kusetha okuyisisekelo kuphela, lapho singaqhubeka khona nokusetha kwe-Alexa.
Xhuma amalambu ku-Amazon Alexa
Ngemuva kokuxhuma ama-smart bulbs (noma ama-plugs noma ama-adaptha anconyiwe) futhi uwaxhume kahle kunethiwekhi yasekhaya ye-Wi-Fi, masithole i-smartphone bese sifaka uhlelo lokusebenza Amazon Alexa, iyatholakala nge-Android ne-iOS.
Ngemuva kokulanda uhlelo lokusebenza, luqalise bese ungena nge-akhawunti yethu ye-Amazon. Uma singenayo i-akhawunti ye-Amazon okwamanje, singayakha ngokushesha ngaphakathi kohlelo lokusebenza noma kuwebhusayithi esemthethweni.
Ngemuva kokungena ngemvume, siyachofoza Amadivaysi Kwesokudla esingezansi, khetha inkinobho ethi + ngakwesokudla ngaphezulu bese ucindezela Faka insiza. Esikrinini esisha sikhetha inketho kuye ngohlobo lwedivayisi okufanele siyilungiselele: Isibani esikhanyayo ukumisa isibani esihlakaniphile; Umshini uma kwenzeka sine-plug smart noma Shintsha uma kungenzeka ngabe sikhethe i-adaptha ye-Wi-Fi yama-single bulbs.
Manje ake singene Ngumuphi umkhiqizo ?, sikhetha uhlobo lwedivayisi yethu, sikhetha inkinobho Qhubeka nomsebenzi omuhle bese sithinta into Nika amandla ukusebenzisa; manje sizocelwa imininingwane yokungena kule nsizakalo ehlotshaniswa namalambu, amasokhethi noma amaswishi athengiwe (njengoba kubonisiwe esahlukweni esedlule). Lapho usufake iziqinisekiso ezifanele, mane ukhethe Xhumanisa manje ukufaka isilawuli sedivayisi ngaphakathi Alexa.
Uma umkhiqizo wedivayisi uvela, singahlala sithinta Okunye futhi ulungiselele mathupha idivayisi, ukuze ivele ngaphakathi kwe-Alexa. Ngemuva kokuxhuma, kuzofanele sikhethe igama ledivayisi kuphela, lapho igumbi noma isigaba esizokufaka khona (Ikhishi, Igumbi lokuhlala, njll.) Bese uchofoza Kwenziwe.
Esahlukweni esilandelayo sizokukhombisa ukuthi ungayisebenzisa kanjani imiyalo yezwi ukulawula amalambu ngawo Alexa.
Izwi liyala ukuphatha amalambu
Ngemuva kokungeza wonke amadivayisi kuhlelo lokusebenza lwe-Alexa, singasebenzisa imiyalo yezwi kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-Alexa noma ku-Amazon Echo esethwe nge-akhawunti efanayo ye-Amazon esetshenziselwa ukusetha.
Nalu uhlu lwemiyalo esingayisebenzisa ukuphatha amalambu nge-Alexa:
"Alexa, khanyisa amalambu [isitanza]"
"Alexa, vula [idivaysi engeyona]"
"Alexa, khanyisa zonke izibani zasendlini yokuphumula"
"Alexa, cisha wonke amalambu asendlini"
"Alexa, khanyisa amalambu egumbi lokuphumula ngo-6 ntambama"
"Alexa, ngivuse ngo-8 ebusuku bese ukhanyisa zonke izibani ezisendlini"
Lena nje eminye yemiyalo yezwi esingayisebenzisa uma amalambu esethelwe ku-Alexa. Ngeminye imininingwane, sikumema ukuthi ufunde umhlahlandlela wethu ku Izici ze-Amazon Echo, yenzelwe ini nokuthi yenzelwe ini.
Ingxenye ebalulekile ye-automation yasekhaya yesikhathi esizayo ukuba khona kwamalambu ahlakaniphile angalawulwa ngabasizi bezwi abanjengo-Amazon Alexa, okuzokuvumela ukuthi ube nokulawula okuphezulu kumadivayisi ahambisanayo.
Uma sifuna ukwenza ushintsho olufanayo ngeKhaya le-Google (ngakho-ke sisebenzisa uMsizi weGoogle) sincoma ukuthi ufunde i-athikili yethu ku- Lokho i-Google Home engakwenza: umsizi wezwi, umculo nokuzenzakalela kwasekhaya. Awuqinisekile ukuthi uzokhetha ini phakathi kwe-Amazon Alexa neGoogle Home? Singathola izimpendulo eziningi emibuzweni yakho ekuhlaziyweni kwethu okujulile. I-Alexa noma i-Google Home? ukuqhathanisa phakathi kwezipikha ezinhle kakhulu nezihlakaniphe kakhulu.